#5 Tantara any an-kafa...Silipo fotsiny no hanaovan’ireo mpifaninana hiditra ao amin’ny tafika mba hisorohana ny halatahaka mandritry ny fanadinana - Transparency International - Initiative Madagascar
#5 Tantara any an-kafa...Silipo fotsiny no hanaovan’ireo mpifaninana hiditra ao amin’ny tafika mba hisorohana ny halatahaka mandritry ny fanadinana
Nivoaka ny 16 Aogositra 2016 ao amin'ny Tantara any an-kafa
Tranga iray tena miely ary sarotra ny mifehy azy ny halatahaka ao Indy indrindra mandritra ireo fanadinana hidirana ho mpiasam-panjakana. Ny taon-dasa dia olona miisa arivo no nosamborina tao amin’ny fanjakan’I Bihar taorian’ny halatahaka goavana nataon’ireo nifaninana hiditra ho polisy. Sary iray mampiseho ireo akaikin’ireo mpiadina izy mihanika ny rindrin’ny toerana hiatrehan’izy ireo fanadinana no niteraka resabe tao Indy.
Araka izany mba hisorohana izay rehetra mety ho fakam-panahy haka tahaka mandritry ny fanadinana dia nahita hevitra tsy nampoizina ny tafika Indiana. Nangataka izy ireo ny hanalan’ireo mpiadina ny akanjon’izy ireo ankoatry ny atiny ambany fanarahamason’ny mpiambina manao fanamiana. Izany koa dia natao mba tsy handaniana fotoana be loatra amin’ny fisavàna ireo mpiadina izy miisa mihoatra ny arivo.
“Rehefa niditra tao Chakkar Maidan izahay, ilay toerana hiatrehana ny fanadinana dia nangatahina mba hanala ny akanjonay ankoatry ny atiny. Tsy nanan-tsafidy izahay ankoatry ny fanarahana ny baikon’izy ireo na dia hafahafa aza izany. Sahabo ho diatongotra valo no elanelan’ireo mpiadina tsirairay” hoy ny fanamafisan’ny mpiadina iray tsy mitonona anarana.
“Tsy nihevitra ny hiatrika fanadinana lehibe amin’ny toerana ivelan’ny trano toy ireny izahay, fa indrindra ny fangatahina anay hanala akanjo toy ireny dia tsy mendrika loatra” hoy ny mpiadina iray hafa.
Rehefa niresaka tamin’ny Indian Express ny manam-boninahitry ny tafika iray izay tsy nitonona anarana dia nanambara fa “Tsy azo ekena ny fanaovana fitsapana an-tsoratra tahaka ireny. Mandritry ny fitsapana ara-batana sy ny fizahana ara-medikaly ihany ny mpiadina no tokony hanala ny akanjony. Ny fitsapana an-tsoratra dia fitsapana ny tsilon’ny saina ka ny famelàna ireo mpiadina tsy hanao afa-tsy atin’akanjo toy ireny dia mampiseho ny tsy fahatomombanana ara-pitantanan’ny fanjakana.